Why we needaNot-to-do list?
To Do List ကို လုပ်ကြတာများပေမယ့် Not to do list ကိုလည်း ထည့်တွက်ကာလုပ်သင့်ပါတယ်။ To do list က အလုပ်ပြီး‌မြောက်ဖို့အတွက် ရာနှုန်းများပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ not to do list ကို plan မချထားတဲ့အခါမှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်အတွက် ‌နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေစေတယ်ဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Not to Do List ကို ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
ယနေ့ခေတ် ၂၁ ရာစုမှာ ဖူးတို့ လူငယ်တွေဟာ ကျောင်းစာအပြင် အခြားသော ကျောင်းစာပြင်ပလှုပ်ရှားမှု (extra-curricular activies )၊ ပရတိတလှုပ်ရှားမှု (volunteering activities)နဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေမှာ တတ်တတ်ကြွကြွပါဝင် လုပ်ကိုင်လာကြပါတယ်။ အခုလို အလုပ်တာဝန်တွေ များလာတာနဲ့အတူ Time Management Skill ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ skill တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ မိမိတို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်များစွာကို အချိန်တိုအတွင်း အမြန် ပြီးမြောက်အောင် ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ plan ချတဲ့အခါ အများစုကတော့ Common strategy ဖြစ်တဲ့ To-do-list ရေးပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် to-do-list ပေါ်က အလုပ်တွေကို efficiency ရှိရှိ၊ productivity ရှိရှိ လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Not-to-do list လေးပါ ရှိနေသင့်ပါတယ်။
Not-to-do list မှာ ဘာတွေ ထည့်ရေးရမလဲ ?
အဓိက ကတော့ မိမိရဲ့ to-do-list လုပ်ဆောင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး productivity ကို လျော့နည်းစေတဲ့အရာတွေကို မဖြစ်မနေ ထည့်ရေးသင့်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Not-to-do list မှာ ထည့်ရေးသင်ံ့တာတွေကတော့
(၁) Social Media သုံးခြင်း
ယနေ့ခေတ် လူငယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ Assignment လုပ်တဲ့အခါ အရင်ခေတ်ကလို paper-based သက်သက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ Internet သုံးပြီး Online reading materials တွေ ရှာဖတ်ရတာမျိုးရှိသလို email နဲ့ assignment တင်ရတာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ Messenger group တွေဖွဲ့ပြီး စာဆွေးနွေးကြသလို group-work presentation နဲ့ assignment တွေလုပ်ရမှာလည်း Google slides နဲ့ Google Docs တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးလာကြပါတယ်။ ခုလို online ကနေပဲ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဖူးတို့ဟာ မရည်ရွယ်ဘဲ လူသုံးအများဆုံး social network ဖြစ်တဲ့ Facebook ကို ရောက်သွားတတ်သလို၊ dictionary ကြည့်ဖို့အတွက် ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပေမယ့် dictionary ကြည့်တဲ့နေရာမရောက်ဘဲ Facebook သုံးတဲ့နေရာကို ‌ရောက်သွားတာမျိုးတွေ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ social media မှာပဲ အချိန်အတော်များများကို သုံးမိမှန်းမသိ သုံးနေမိတော့ပြီး မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကိုပြန်မရောက်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတာမျိုးတွေ၊ အချိန်သာကုန်သွားပြီး အလုပ်မပြီးတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် online ကနေ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေ၊ electronic devices တွေကိုသုံးပြီး offline လုပ်ရတဲ့အခါဖြစ်စေ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကလွဲပြီး social media မှာ အချိန်ကုန်တာမျိုး မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
(၂) Emails & Phone Calls
အလုပ်မပြီးမြောက်ရတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းအရင်းကတော့ အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ email စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ဖုန်းပြောဆိုခြင်းတို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ email account ကို ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ ဖုန်းပြောဆိုခြင်းတို့ကို လုပ်စရာရှိသော အလုပ်များပြီးမှသာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Internet ဖွင့်ထားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ Youtube မှာ မိမိတို့ subscribe လုပ်ထားတဲ့ channel ကနေ notification တတ်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့အခါ notification တွေကို ဝင်ကြည့်ရင်း Youtube မှာ အခြားသော video များကိုပါ ဆက်ကြည့်မိပြီး အချိန်ကုန် အလုပ်မပြီးတာမျိုး ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် online အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ Youtube ကို မသုံးမိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
To do list ကော Not to do list ကော လုပ်ထားတဲ့ Plan က သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာမှာဖြစ်သလို အရင်ကထက် ပိုမိုထိရောက်သွားမှာဖြစ်လို့ Not-to-do list ကို အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Ref : Life Leverage written by Brian Traucy
Content - Kyal Sin Phu Graphic - Thet Wai Htun
July 2020 (6)6p